Topnepalnews.com | राजनितिक अवस्थामा देखिएको सुधारले शेयर बजारमा कस्तो सुधार आउला ?
राजनितिक अवस्थामा देखिएको सुधारले शेयर बजारमा कस्तो सुधार आउला ?
Posted on: May 02, 2016 | views: 176
राजनितिक घटना क्रम अनि भारतीय नाकाबन्दीका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर अवस्थामा पुगेका बेला त्यसको प्रत्यक्ष असर शेयर बजारमा पनि देखिंदै आएको छ । यस क्रममा राजनितिक घटनाक्रममा सुधारका संकेतहरु पनि देखिन थालेका छन् । बजारमा बढेको तरलताका कारण उतार चढावका बिच पछिल्ला केही दिनदेखि सकरात्मक बन्दै गइरहेको शेयर बजारले अब कुन गति लिएला भन्ने चासो लगानीकर्तामा बढेर गएको छ ।
१ सय २० दिन भन्दा लामो समयसम्म चलेको मधेश आन्दोलन, भारतले लगाएको नाकाबन्दी लगायत कारणले अर्थतन्त्र अहिलेसम्म कै कमजोर अवस्थामा पुगे पनि त्यसले निम्त्याएको तरलताले शेयर बजारलाई केही हदसम्म तल झर्नबाट रोकेको छ । तर लगानीकर्तामा त्रास भने छदैं छ अब के होला ? लगानी डुब्ने पो हो कि ? यस्तै कुराले परिोलीरहेका बेला सोमबारको राजनितिक घटनाक्रमले शेयर बजारका लागनीकर्तालाई केही हदसम्म भए पनि आशावादी बनाएको छ ।
सरकारले सोमबार राजनितिक संयन्त्र गठन गरेर समाधान खाज्ने सम्बन्धमा आन्दोलनरत मधेशी मोर्चाका नेतालाई जानकारी गराए पछि नेताहरुले मधेशका माग सम्बोधनमा सरकार एक कदम अघि बढेको प्रतिकृया दिंदै निकास खाज्न सकरात्मक भएको आशय व्यक्त गरेपछि अवस्था सुधारोन्मुख देखिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमा मन्त्री कमल थापाले मोर्चाका नेतालाई बोलाएर गरेको ब्रिफिङले राजनितिक अवस्थामा सुधार देखिने आशा जगायो । जसले पनि शेयर बजारका लगानीकर्ता केही हदसम्म उत्साहित हुने अवस्था श्रृजना गर्यो ।
त्यस लगत्तै सोमबार अपरान्ह भारतीय विदेश मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै मधेश आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने गरि नेपाल सरकारले गरेको संविधान संशोधनको निर्णलाई स्वागत गर्यो । संविधान जारी हुँदाका बखत केही नबोलेको भारतले संसोधनको निर्णयलाई गरेको स्वागतले अब नाकाबन्दी खुल्न सक्ने संकेतका रुपमा पनि हेरिएको छ । विज्ञप्ती माफृत भारतीय विदेश मन्त्रालयले भनेको छ –‘अब थप सुरक्षित र सहज वातावरणका माझ दुई देश बिचको वाणिज्य सुचारु हुने छ ।’
यो भनाई ले पनि अब नाकाबन्दी हट्ने र दैनिकी सामान्य अवस्थामा फर्किने आशाका बिच लगानीकर्ता पनि शेयर बजारमा लगानी गर्न उत्सुक हुने अवस्था देखिएको छ । यसले अब नेप्सेमा देखा पर्न थालेको बढ्ने क्रमलाई केही हदसम्म टेवा पुर्याउने देखिन्छ ।
नाकाबन्दीले अर्थतन्त्र कमजोर बन्दा पछि हटेका लगानीकर्ता पनि बजारमा सक्रिय रुपमा भित्रिने अवस्थाले शेयर बजारलाई माथि जान सहज हुने अवस्था छ । बजारमा तरलता बढेका कारण लगानी गर्ने क्षेत्रको अभावमा पनि बजारमा त्यो रकम भित्रिने शेयर विष्लेशक रविन्द्र भट्टराईको बुझाई छ ।
‘राजनितिक रुपमा देखिएको सुधारले कमजोर अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्रलाई तत्काल सुधार गर्न नसके पनि लगानीकर्तामा उत्साह देखिने अवस्था छ । तरलता बढेका कारण त्यो रकम शेयर बजारमा लगानी गर्न अहिलेको घटनाक्रले उत्साहित बनाउने भएकाले बजार सकरात्मक हुन्छ ।’ मेरो लगानीसंग कुरा गर्दै विष्लेशक भट्टराईले भने ।
अहिले अधिकांस कम्पनीले लाभांस धोषणा तथा बितरण गर्ने क्रम तिब्र भएका कारण पनि बजार तल झर्न नसकिरहेको अवस्था छ । अब राजनितिक घटनात्रममा देखिएका सुधारका संकेत अनि कम्पनीहरुको लाभांस बितरण प्रकृयाले लगानीकर्ताहरु बजारबाट बाहिरिन नचाहने अवस्था तयार हुने देखिएको छ । अधm बरु शेयर बजारमा नयाँ लगानीकर्ताहरु थपिने अवस्था देखा पर्नुले पनि अब शेयर बजारमा अर्को मोड आउने आँकलन गर्न सकिन्छ ।
देशमा अन्य क्षेत्रमा लगानीको वातावरण नहुनु, तराई क्षेत्रमा चार महिनाभन्दा बढी समयदेखि उद्योग धन्दा ठप्प हुनु, सुनचाँदी गहना, घरजग्गा ब्यापारमा पनि चमक आउन नसक्नु लगायतका कुराहरुले शेयर बजारबाट ठूलो रकम अर्को क्षेत्रतर्फ मोडिन नसकेको अवस्थामा सबै कुरामा सुधार आए पछि लगानीकर्ता अन्यत्र मोडिने अवस्थालाई भने नकार्न सकिन्न । तर यसका लागि अहिलेको अवस्थामा सुधार देखा पर्न अनिवार्य भएकाले तत्काल त्यो सम्भावना पनि देखिंदैन ।
गत बैैसाखको भुकम्प क्षतिको सामना गरेका बैंक तथा बीमा कम्पनीहरुलाई भारतीय नाकाबन्दीले पनि धेरै असर पारेको छ । तराईमा जारी आन्दोलनले त्यस क्षेत्रमा रहेका बेंकहरु लामो समयसम्म निर्बाध रुपमा कारोबार गर्न नसकेका बेला अवस्थामा परिवर्तन आउने आशाले पनि शेयर बजारलाई केही हदसम्म टेवा पुर्याउने देखिन्छ । कारण ती बैंक तथा बीमा कम्पनीको आम्दानीमा लगानीकर्ताले पनि बढोत्तरीको अपेक्षा गर्नु नै हो ।
शेयर बजारको अर्को बिशेषता भनेकै लगानीकर्ताको मनोबल हो । जसलाई अहिलेको जस्तै विभिन्न चरणमा भएका राजनितिक घटनाक्रले डोर्याइरहेका छन् । र सोमबारबाट नेपाली राजनितिमा देखिएको एक किसिमको ‘यु टर्न’ले पनि ती लगानीकर्ताको अपेक्षालाई बलियो बनाउने निश्चित छ ।
अर्थ राजनीतिका सबै कुरा ठीक रहे पनि कतिपय समयमा शेयर बजारमा उतार र चढाव आई नै रहन्छ । यही नै कारणले यो बेला शेयरको भाउ घट्छ र बढ्छ भनी अनुमान लगाउनु अर्थहिन हुने कयौं घटनाक्रमले प्रमाणित गरेको छ ।
अझ हाम्रो जस्तो तथ्य र कम्पनीको अबस्था बिश्लेषण भन्दा हल्लाको भरमा चल्ने बजारमा यस्तो आँकलन गर्नु अझै गाह्रो कुरा हो । तर अहिलेको अवस्था भने अलि फरक किसिमको भएकाले पनि लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाउने वातावरण बन्दा लगानीकर्ताको कनोबलमा पनि सुधार आउने कुराले पनि अब बजार माथि चढ्ने कुरा नकार्न सकिन्न ।
किनभने नेपालको शेयर बजारमा साना राजनीतिक घटनाक्रमले पनि कहिले काँही अपत्यारिलो परिणाम देखाउने गरेको तथ्य पनि सर्वविदितै छ ।